Autonomous kutyaira izita ratiri kuita zvishoma nezvishoma kujaira, pamwe ne zvemagetsi uye hybrid simba, semotokari dzemangwana dzinotora nzira.
Tichiri nzira yakanaka kubva kumotokari dzisina kutyaira zvachose, asi tekinoroji inoita kuti kutyaira zvishoma zvishoma - uye zvakachengeteka - irikuonekwa mumotokari kumusoro nekudzika nemigwagwa mikuru.
Asi iwe unogona kunge wakawona kuti pane akasiyana mazinga ekuzvityaira anoshanda ega, kubva pa0 kusvika ku5. Asi zvinorevei chaizvo? Tibvumire kutsanangura.
Ndiani anotsanagura aya madzviti emotokari anoshanda?
SAE International (Sangano reMotokari Injiniya) rakaburitsa maitiro ehurongwa yezvikamu zvitanhatu zvakasiyana zverudzi rwekuzvitonga muna 2014, iyo yakazovandudzwa muna2016 na2018 yakanzi "Taxonomy uye Dudziro dzeMatemu Akanangana neDrive Automation Systems yeOn-Road Mota Mota".
Chikamu chega chega chinotaridzwa nehuwandu hwemutyairi anodiwa kuti apindire uye kuti anoteerera sei pavanenge vari kumashure kwevhiri remotokari inozvimirira.
Zvakawanda uye zvakawandisa, aya mazinga ari kutaurwa kune kutenderera kwekukurukurirana kwezvinhu zvakasununguka mumotokari.
Ndeapi mazingairo ekushanya ekutyaira?
Iko kune matanhatu nhanho yekuzvitonga muhurongwa hwekugadzika, kubva padanho 0 kusvika pamazinga mashanu:
Chikamu 0: A level 0 mota inogona kunge yakagara pane yako driveway izvozvi. Ivo havana anozvitonga kana kuzvidzora zvekuzvidzora zvachose, nezvinhu zvese zvekutyaira zvinoda kutarisirwa nemutyairi, kusanganisira kuitawo njodzi.
Chikamu 1: Level 1 kuzvitonga ndiyo inonyanya kuitika mumigwagwa nhasi. Izvo zvinoreva kune mota dzine macustoms anobvumidza mota nemutyairi kugovana kudzora kwemotokari. Adaptive cruise control, iyo inodzora kumhanya uye chinhambwe ichienzaniswa nemota iri pamberi ndiyo muenzaniso wakanaka, sezvo mutyairi achiri kungwarira kutungamira.
Ipaki inobatsira chiitiko muenzaniso weganhu 1 zvakare, sezvo mutyairi achifanirwa kudzora kumhanya kwemota uku mota ichiita hanya nekufambisa.
Kune huwandu hweakachengetedzeka maficha pane vazhinji vagadziri ayo anopa imwe nhanho 1 kuzvidzora.
Chikamu 2: Level 2 mota dzine zvemukati system dzinotarisira zvese zvikamu zvekutyaira: kutungamira, kukwirisa uye kukwirira. Nekudaro, mutyairi anofanira kunge achikwanisa kupindira kana chero chikamu chechirongwa chikatadza.
Chikamu chechipiri chinonziwo "maoko-kure". Zvisinei, mutyairi anodikanwa kuti agare akaisa maoko ake pairi vhiri nguva dzese uye anofanira kugara akangwarira mamiriro emugwagwa.
Tesla's Autopilot inogona kutariswa padanho repiri, sezvo ichikwanisa kukuchengeta iwe munzira chaiyo mumugwagwa uye kukuchengetedza uri padaro rakachengeteka kubva kumota iri kumberi kana uri mukumanikidza kwemotokari. Nissan's ProPilot iri zvakare nhanho yechipiri, sekuwanikwa mune Nissan Leaf.
Chikamu 3: Chikamu chechitatu mota ndidzo dzinogona kunyatso fungidzirwa kuzvimiririra. Kazhinji zvinonzi mota "dzinoenda-kure", idzo dzinowira muchikamu chechitatu dzinogona kubvumira mutyairi kuti agare pasi azorore sezvo mota ichigona kutarisira zvese ichityaira mumugwagwa.
Vatyairi vanobvumidzwa kushandisa zvakachengeteka foni yavo kana kuona mabhaisikopo, kunyangwe ivo vachiri kudikanwa kuve varipo-kuti vapindire kana zvichidikanwa, saka kurara haisiyo sarudzo.
Iyo Audi's A8 ndiyo yaive mota yekutanga kubvunza kuzvidzora kwenhanho ye3, sezvo ichigona kutora ese maficha ekutyaira, munzira inononoka kufamba kusvika 60kph. Nekudaro, izvo zvidzoreso hazvina kumbouya kumota uye zvakatosiiwa nekuti parizvino inodzora grey nzvimbo: ingave zviri pamutemo kutyaira mu "maziso-kure" mamiriro inyaya yakasiyana - parizvino, iwe uchiri kufanira kunge uchidzora mota kana uchityaira mumigwagwa yeruzhinji.
Chikamu 4: Mota 4 mota dzinonzi "mind-off", nekuti ivo vanokwanisa zvekuti mutyairi haafanire kupindira zvachose, saka unogona kuenda kunorara kana uchida.
Nekudaro, pane zvimwe zvinorambidzwa, sezvo iyo yakazara-yega-yekutyaira nzira inogona kungogoneswa mune dzimwe, nzvimbo dzine geofified kana mumatra traffic. Kana mota isiri munzvimbo yakatarwa kana mukumanikidza kwemotokari, saka inofanira kukwanisa kuzviendesa kune yakachengeteka kana mutyairi asingakwanise kutora kutonga mune emergency.
Muenzaniso wakanaka wemhando yechina mota ndeye Google's Waymo chirongwa. Mota dzeWaymo dzave kushanda mutyairi mahara kwenguva yakati muUS, kunyangwe mutyairi wekuyedza ari parutivi kungangoitika chero chinhu chisina kumira zvakanaka.
Chikamu 5: Level 5 mota ndidzo dzinoda kuti pasapindirwe nevanhu chero, iwo akazara akazara mota. Mienzaniso yenhamba 5 dzemotokari ndeye robotic matekisi kana Audi's Aicon pfungwa pamusoro.
Tichiri kure kuenda kuisa nhanho shanu mota mukugadzira kwakawanda, kunyangwe Elon Musk akati kuti Tesla wpuld gadzirira chikamu che5 muna 2020.
Uye, hongu, hapasati paine chimiro chemutemo cheLevel 5.
Kuchave nemitekisi inozvimiririra?
Ride-kugovera hofori Uber akasaina chibvumirano naVolvo kugadzira mota dzekuzvityaira pamwechete. Volvo ichavaka mota - uye Volvo inozivikanwa nekukwirira kwayo kwakachengeteka - uye Uber anozoitora, tinker nayo ndokuiisa mumigwagwa muchimiro cheyako-yekutyaira tekisi.
Nissan ndeimwe inogadzira mota inotarisa mukati self-kutyaira cabs, uye yatanga kurovera basa rayo Rakareba muKwayedza, Japan. Urongwa ndekuve neakazvimiririra yakakwana kuzvimiririra tekisi kumusoro uye kumhanya munguva yeTokyo Olimpiki gore rino.
Sezvatakambotaura, Tesla anodawo kuti mota yako igone kuve wega-unozvityaira tekisi iwe usiri kuishandisa.
Mota dzinozvifambisa ichave riinhi munzira?
Munyika zhinji, masisitimu ekutyaira akazvimirira anoedzwa pasi pemamwe mamiriro, kazhinji aine mvumo dzakakosha. Masisitimu aripo - anosvika kuzinga reSAE rechipiri - anoiswa sisitimu yekubatsira mutyairi (ADAS) zvichireva kuti mutyairi zviri pamutemo ane chekuita nemota uye anofanirwa kuramba achidzora mota nguva dzese.
Kubvunza kune akatanga kuUK iyo ichatarisa iro basa repamutemo rehurongwa hwakadai, hunogona kuonekwa sedanho rekutanga kuchinjiko repamutemo rinodiwa kuwana mota dzinozvimiririra mumigwagwa yeUK.
Apple CarPlay yakatsanangura: Kutora iOS munzira
Chii chinonzi hybrid, inozvidzora hybrid uye plug-in hybrid?
Apple Autonomous Driving Training Program Inosimbisa Self-Driving Software Platform
10 Zvigadzirwa zveGadget Kuti Zviite Chaizvo Chero Car Smart
'Crash Arena Turbo Nyeredzi' Dzakanakisa Mota Uye Weapon Combos: Matipi Matipi Ekuvaka Anopikisa-Kupwanya Machine